Taonan’ny tolona ara-politika sy fanehoana firaisankina tsy nampoizina tao Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2019 6:01 GMT
Any avaratra, mankany Meksika ny “valalamanjohin'ny mpifindramonina” mandositra ny herisetra any Amerika Afovoany ary mamoha ny fihetseham-po mankahala mpifindra monina. Manaraka akaiky izay mitranga ao amin'ny sisintany miaraka amin'i Etazonia ny haino aman-jery, saingy tsy mba maka fotoana hanazavana ny antony mahatonga ny Amerikana Afovoany handositra ny toerana nonenany.
Voahozongozona ny demaokrasia any Goatemalà amin'ny fandàvan'ny Filoha Jimmy Morales hanavao ny fe-potoam-piasan'ny Vaomiera Iraisam-pirenena miady amin'ny tsimatimanota tohanan'ny Firenena Mikambana. Nanohana ny fiverenan'ilay kaomisera ny fitsarana tampony ao amin'ny firenena, mampisy fanantenana ho an'ireo izay manohana ny fikambanana ara-dalàna amin'ny ady atao amin'ny tsimatimanota izany. Tsy niverina nankany Goatemalà ny kaomisera Iván Velázquez, na izany aza, ary tamin'ny resadresaka vao haingana dia nanameloka ny ezaka fanampiny ataon'ny governemanta hanakatonana ny vaomiera izy. Anisan'izany ny fanesorana vao haingana ny tsy fahazoana manenjika ara-pitsarana ara-diplaomatika ireo mpiasa miisa 11 ao amin'ny Vaomiera.
Any Nikaragoà, nivadika ho hatezerana nasionaly manohitra ny kolikoly sy ny sivana ny fihetsiketseham-panoherana ny fanavaozana ny fiarovana ara-tsosialy. Haingana sy mahery setra ny famoretana. Olona maherin'ny 300 no maty hatramin'ny nanombohan'ny hetsi-panoherana tamin'ny volana Aprily. Niharan'ny herisetra mahery vaika ihany koa ny mpanao gazety. Manondro ny governemantan'i Daniel Ortega ho tompon'andraikitra voalohany ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona
Mankalaza ny faha-50 taonan'ny tsingerintaonan'ny Hetsika Meksikana tamin'ny taona 1968 i Meksika. Volana maro taty aoriana, nifidy filoham-pirenena ankavia izy taorian'ny nitondran'ny governemanta ankavanana ampolony taona maro. Na izany aza dia tsy nangina izy rehefa nambaran'i AMLO ny fananganana polisy miaramila izay hiady amin'ny heloka bevava an-drenivohitra. Maro ny fahasarotana miandry ny filoham-pirenena vaovao, saingy antenaina fa hitondra fanampiana ireo hetsika tarihin'olom-pirenena.
Tsy i Meksika ihany no nahitana fifidianana nanozongozona ny faritra. Nanaitra ireo fikambanana marobe mpandala ny zon'olombelona i Fabricio Alvarado, prezidàn'i Costa Rica, kristiana mpandala ny nentim-paharazana, ​​indrindra fa ireo fikambanana izay miaro zon'ny LGBTQ. Na izany aza, ilay mpandala ny fandrosoana, Carlos Alvarado no mpandresy ary niaraka taminy, Epsy Campbell Barr, vehivavy filoha lefitra mainty hoditra voalohany tao Costa Rica.
Nampiaka-peo noho ireo mpikatroka ara-tsosialy novoina ny Kolombiana. Tao anatin'ny tapa-taona monja, dia mpikatroka maherin'ny zato no namoy ny ainy. Noho ny fifanarahana momba ny fandriampahalemana sy ny fivoaran'ny ady an-trano ao amin'ny firenena, dia nisy ny ady hifehezana ny tany.
Farany, dia Arzantina no akaiky indrindra hatrizay amin'ny fankatoavana ny fanalan-jaza ho ara-dalàna. Niafara tamin'ny latsa-bato manohitra izany ny Senà, saingy goavana ny hetsika teny an-dalambe sy antserasera ary nampiseho firaisankina tsy hay hadinoina tao Amerika Latina sy ny any ivelany.